Tafiditra tao anatin’ny fikarohana nataon’ireo tanora mpiofana tao amin’ny FES ny fandalinana ny pôlitika. Nosinganina manokana ny fanaovana fampitahana ireo vinan’asan’ny kandidà Andry RAJOELINA sy ny kandidà Marc RAVALOMANANA.
Araka ny fangatahana nataon’ireo tanora avy ao amin’ny FES ireo, nikasa ny hanasa ny kandidà roa tonta izy ireo androany. Nangataka ny hanemorana izany ny avy amin’ny kandidà Andry RAJOELINA ary nilaza izy ireo fa vonona hiatrika izany aorian’ny famoahan’ny fitsarana avo momba ny lalàmpanorenenana na HCC ny voka-pifidianana ôfisialy.
Anisany nanome fiofanana sy namolavola tanora maro ny FES ary nampiavaka azy ny fandalinanana manokana ny raharaha manodidina ny pôlitika sy ny toe-karena ary ny fahaiza-mitantana.